के दाउद इब्राहिमको कोरोनाका कारण मृत्यु भयो ? एकदिन अघि मात्रै भाइले भनेका थिए, ‘दाइ संक्रमित छैनन्’ | के दाउद इब्राहिमको कोरोनाका कारण मृत्यु भयो ? एकदिन अघि मात्रै भाइले भनेका थिए, ‘दाइ संक्रमित छैनन्’ – हिपमत
भारतका मोस्ट वान्टेड र अन्डरवर्ल्ड डन भनिने दाउद इब्राहिमको मृत्यु भएको अड्कलबाजी चल्ने क्रम जारी छ । वास्तवमा शुक्रबार भारतका केही मिडियाले आफ्नो रिपोर्टमा दाउद र उनकी श्रीमती कोरोना संक्रमित भएको र कराँचीको सैनिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेको जानकारी दिएका थिए । दुबैको स्थिती गम्भीर बताइएको थियो । त्यसपछि शनिबार उनको मृत्युको खबर सार्वजनिक हुन थाल्यो । अहिलेसम्म यसको पुष्टि हुन सकेको छैन । शुक्रबारमात्रै दाउदका भाइ अनिसले दाउद संक्रमित नभएको स्पष्टिकरण दिएका थिए । अनिसले भनेका थिए, ‘डी कम्पनी (दाउदको नेटवर्कलाई यसै नामले चिनिन्छ) दुबई र पाकिस्तानमा व्यापार गरिरहेको छ ।’
अनिसका अनुसार डी कम्पनीले पाकिस्तान र दुबईमा व्यापार गरिरहेको छ । अनिसलाई जब युएईको लग्जरी होटल र पाकिस्तानमा ठूला प्रोजेक्टबारे प्रश्न सोधियो तब उनले भने, ‘यातायातको व्यवसाय पनि चलाइरहेका छन् ।’ एजेन्सी